Kedu ihe bụ ọnụ ọgụgụ ụgbọ ala na-arụ ọrụ n'ime ụgbọ elu ụgbọ elu EGO? | RayHaber
[05 / 12 / 2019] General Directorate nke okporo ụzọ ebubatala ụgbọala ọhụrụ	03 Afyonkarahisar
[05 / 12 / 2019] Mgbe ụzọ ụgbọ oloko Projects Ọnọdụ na Turkey	16 Bursa
[05 / 12 / 2019] Mayor Altay kwuru okwu banyere Konya Metro na itinye ego ndị ọzọ	42 Konya
[05 / 12 / 2019] Elere Haydarpaşa train Train Station Maka Oge mbu	34 Istanbul
[05 / 12 / 2019] Onweghi Nzoghari azu na Kartepe Cable Car Project	41 Kocaeli
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraKedu ihe bụ ọnụ ọgụgụ ụgbọ ala na-arụ ọrụ n'ime ụgbọ elu ụgbọ elu EGO?
09 / 11 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, Ego, General, Ụzọ Awara Awara, oru, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey
Na 2012, ya na Iwu Nke 6360, a gbatịkwuru ókè nke mpaghara ọgụ na ọnụọgụ nke mpaghara dị n'etiti mpaghara ọgụ sitere na 16 rue 25. Agbanyeghị na ọnụ ọgụgụ ndị Ankara mụbara site na 2013 n'etiti 2018-9 afọ, ụgbọ elu ụgbọ elu EGO belatara site na 20%.
Emere ụgbọ ala ohuru na EGO General Directorate nke Ankara Metropolitan Municipality dị na 2013. Ya mere, nkezi afọ ụgbọ ala amụbaala ruo 10.5. Nke a na-eme ka ụgbọ ala ndị ahụ na-emebi emebi ugboro ugboro ma na-abawanye ụgwọ mmezi yana ndozi.
N'ihi erughi ụgbọ ala ezughi ezu, ọrụ ndị ọrụ ụgbọ njem ọha na eze chọrọ ka ụmụ amaala bi ebe a na mmụba nke ebe obibi ọhụrụ agaghị enwe ike iru etu achọrọ.
2019 Dị ka afọ, ọnụ ọgụgụ nke ụgbọ ala na-arụ ọrụ bụ 1540. Nọmba a gunyere 97 1999 nlereanya Solo na ụgbọ ala Bellows. N'ihi ndụ akụ na ụba nke bọs ndị a, ọrụ na-ada mgbe niile. Ihe ndị a na-emezighị emezi na-eme ka a kwụsị mmemme ọrụ n'ehihie. Vehiclesfọdụ ụgbọ ala anaghị eji ma ọlị.
N'ime usoro nke data ndị a gbasara ọnọdụ ụgbọ ala ụgbọ mmiri dị ugbu a, ọ bụ ihe nwute ịgaghị enwe ike ịmepe ahịrị ọhụụ ma ọ bụ nwekwuo ọrụ n'okporo ụzọ nwere oke njem. Ọnọdụ a na-eme ka ụmụ amaala bụrụ ndị emetụtara.
General Directorate nke EGO na-eduzi ọmụmụ njikarịcha nke Line na Ankara iji hụ na arụmọrụ kachasị mma nke ndị ụgbọ ala ya dị ugbu a. Maka ebumnuche a, a kpụrụ otu n'ime nzukọ ahụ. Otu a ga-ebu ụzọ lebara ahịrị nsogbu ndị ahụ anya wee mepụta ngwangwa ozugbo enwere ike.
Na mgbakwunye na nke a, site na ịbịaru nsogbu njem na okporo ụzọ nke Başkent Ankara nwere nghọta ọha na eze na atumatu ụgbọ njem na usoro ọgbara ọhụrụ, ọ dị mkpa iji hụ na mkpebi ziri ezi, nke ziri ezi na nke ziri ezi enweghị nchegbu gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọkachasị site na ịtụle ụkpụrụ nke ikere òkè, nghọta na ngosipụta. bu n'obi i choro ya n'uzo ezi uche jiri ya mee ihe mmekorita nke gburugburu ebe obibi, nke ugbua, nke aku n'uba, nke na adighi ike.
ọnụ ọgụgụ ndị na-arụsi ọrụ ike nke ndị isi ụlọ ọrụ ego
Ọnụ ọgụgụ nke ụlọ na Akçaray na-abawanye na 15
E Bus Bus si Polatlıdan ruo Ümitköy Metro malitere
Ụlọ abụọ site na EGO ka ọtụtụ obodo
EGO Bus Schedules na Lake Eymir
Na-akwado 3 Buses ka Mostar, Bosnia na Herzegovina
3 Bus gaa Bosnia na Herzegovina
EGO 354 karịrị otu nde na bọs na ụgbọ okporo ígwè…
Mahadum Njikọ Mgbafe Mahadum EGO General…
Taa na akụkọ ihe mere eme: 6 December 1938 Adana Central Station
Petrol Ofisi dị nso na ndị ọkwọ ụgbọ ala na-awusi ike
Ọrụ Nkwukọrịta Sịnetị nke Mars